Reer Burco Halbaa Seegtay, Hawd-na Halbaa Seegtay,Muuse-na Halbaa Seegtay, Raga Aan Ku Jirana Halbaa Seegtay...Siyaasi Maxamuud Xaashi
Saturday November 21, 2020 - 13:10:57 in News by G. Good
Hargeysa(HWN):-Siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa ka hadlay dhaliilaha ka muuqday ciyaarihii gobolada somaliland ee todobaadkii hore soo dhamaaday.
siyaasi Maxamuud Xaashi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku soo bandhigay talaabooyinkii seegay cid kasta oo xalin lahayd khaladaadkii ka soo baxay ciyaarihii gobolada, waxaanu qoraalkiisa u dhignaa sidan:-
Wasaarada ciyaaraha iyo dhaliinyarada jsl, waxaan ku bogaadinayaa doorkii fiicnaa, ee ay ka qaateen tartanka ciyaaraha gobalada dalka. Hasayeeshee, waxaa seegay ganaaxii ay saareen gobolada Togdheer iyo Hawd gudida anshaxu. Ganaaxu wuxuu u muuqdaa, mid aan ka turjumayn waaqaca runta ah, isla markaana aan loo miidaan dayin. Sidaa darteed, nin habari dhashay hal ma seegi waayo'e waxaan kula talinayaa in ay ka noqdaan go'aankaa guracan. Ganaaxa iyo ciqaabtu waa inaanay noqon mid wadareed, balse waa inay ku koobnaataa shakhsiyaadka fal danbiyeedka galay oo kali ah.